उपचारका लागि विदेश आउनु पर्दा लज्जित छुः डा. बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टाराईले विदेशमा उपचार गराउनु पर्दा आफू अत्यन्त लज्जित भएको बताएका छन्। आइतबार स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत गएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत उपचारका लागि विदेश आउनुपरेकोमा आफू लज्जित भएको बताएका हुन्।
भट्टराईले २१ औँ शताव्दीमा पनि शरीरमा पलाएको ट्युमर सामान्य हो कि घातक हो छुट्याउनकै लागि भारत आउनुपर्दा आफू लञ्जित भएको टिप्पणी गरेका हुन्। टमा समस्या देखिएपछि भट्टराईले लामो समयदेखि काठमाडौंको निदान अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका थिए। उपचारका क्रममा चिकित्सकले न्युरो-इन्डोक्राइनको ट्युमर भएको आशंका गरी सिफारिस गरेकाले उनी थप उपचारका लागि दिल्ली गएका हुन्।
भट्टाराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘मेरो स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुहुने सबै साथीहरू! अहिले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको अतिथि कक्षमा बसेर घोत्लिँदै गर्दा अत्यन्त लज्जित/दुःखित छु। २१औं शताब्दीमा शरीरको कुनामा पलाएको ट्युमर सामान्य कि घातक हो छुट्याउन नसकेर विदेशमा छु! सामान्य नागरिकको के होला?’
दिल्लीमा डा भट्टराईले ‘इन्स्टिच्युट अफ लिभर एन्ड बिलिअरी साइन्सेस’मा उपचार गराउने उनको सचिवालयले जनाएको छ। उपचारका क्रममा भट्टराईसँग श्रीमती हिसिला यमी र प्रेस सल्लाहकार पाण्डे रहने भट्टराईको सचिवालयले जनाएको छ।
डा. केसीले स्थगित गरे २० औं सत्याग्रह